Fitokanana foto-drafitrasa: trano fitsirihana nofon-tany, toeram-pivarotana asa-tanana ary ivon-toeram-pandraharahana | Région Boeny
Fitokanana foto-drafitrasa telo no notanterahana ny sabotsy 30 jolay 2016 teto an-drenivohitr’I Boeny.
Mbola tafiditra tao anatin’ny lanonan’ny Foarabe Lojy mitsangana nokarakarain’ny PROSPERER, ireo lanonam-pitokanana ireo.
Ny voalohany dia tao amin’ny toeram-pikarohana FOFIFA aty amin’ny faritra avaratra andrefana, ao Mahavoky Avaratra Mahajanga, trano iray natao ho fitsirihana ny nofon-tany mba ahazoana mitily ireo singa rehetra izay ilaina amin’ny famokarana ny voly fihinana sy ireo ahitra sakafonom-biby. Ankoatra izay dia hanaovana asa-pikarohana maro mikasika ny fandonahana ny tany koa ao amin’io laboratoara io, eo koa ny fitsirihana ny kalitaon’ny zezika sy ny rano. Ary toerana iray natao hampiofanana ireo tanora manomana ny marim-pahaizana LMD ka manao ny asa fikarohana ao.
Faharoa notokanana dia teny Amborovy: iray amin’ireo toeram-pivarotana asa-tànana natsangan’ny PROSPERER Boeny. Ka ireo fikambanan’ny mpanao asa-tànana amin’iny faritra iny no hitantana azy.
Nofaranana tamin’ny fitokanana ny Ivotoeram-pandraharahana isan-tsokajiny sy Fandraisana Vondron’olona (Centre d’affaires polyvalent et d’Accueil de Groupement) teny amin’ny Tranoben’ny Varotra sy ny Indostria Mahajanga eny amin’ny Bord de la mer. Araka izay anarany izay dia fandraharahana sy fanaovana fihaonan’ireo mpandraharaha isan-tsokajiny ity toerana ity, izay tantanan’ny PROSPERER.
Ny governemanta Indianina nosolontenan’ny masoivohony monina sy miasa eto Madagasikara, ny PROSPERER, ary ny ECOPOWER no mpiara-miombon’antoka nanatosa azy io.
Olomanan-kaja maro no nanatrika izao lanonana izao, anisan’izany ny Minisitra eo anivon’ny Fiadidina ny Repoblika misahana ny Fambolena sy ny Fiompiana, Atoa Rakotovao Rivo sy ny Minisitry ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana Siantifika, Rtoa Marie Monique Rasoazananera. Nambaran’ity farany fa mbola kely ny taham-pamokaram-bary eto Madagasikara satria dia manodidina ny 3 taonina isaky ny hekitara eo ho eo foana efa nandritra ny taona maro amin’ny ankapobeny. Raha jerena nefa hoy izy ny filana te-hinam-bary any ivelany dia tokony hanondrana vary tokoa isika. Nanamafy izany koa ny Minisitra Rakotovao Rivo, izay nilaza fa dingana iray lehibe ahafahana mampitombo sy mamokatra bebe kokoa ny vokatra ny fananana ilay trano fitsirihana ny nofon-tany.
Nandray sy nitarika izao lanonana izao niaraka tamin’ireo vahiny manan-kaja ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar. Any Toamasina indray no hanatanterahana ny fitokanana ny trano fitsirihana nofon-tany faharoa hoy ny Tale jeneralin’ny FOFIFA, Atoa Aimé Lala Razafinjara.